Home Page COVID-19 – Mason ဆိုကျောင်းများ COVID-19 ဌာနချုပ်
သင်၏ကြီးကြပ်သူအဖြစ်, ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ရပ်ရွာကိုတသမတ်တည်းဆက်သွယ်ခြင်းမှတဆင့်ထောက်ပံ့ခြင်းနှင့်ဂရုပြုရန်ဤနေရာတွင်ရှိကြောင်းသိစေလိုသည်, အရင်းအမြစ်များ, မျှော်လင့်ပါတယ်။
ကျနော်တို့ကဒီစိန်ခေါ်မှုဖြစ်ရပ်မှတဆင့်တိုးတက်အဖြစ်, ကျနော်တို့ဆက်သွယ်ဆက်လက်ပါလိမ့်မယ် – ငါတို့သိတာတွေကိုမင်းကိုအသိပေးခြင်း, ငါတို့သိတဲ့အခါ. ကျွန်ုပ်တို့၏နေ့စဉ်သတင်းစကားအတွက်အောက်တွင်နှိပ်ပါ.
Aprilပြီလတွင် 6, ကျွန်ုပ်တို့သည် Remote Learning Environment သို့ကူးပြောင်းပါမည်. ၀ န်ထမ်းများကဤပြောင်းလဲမှုအတွက်ပြင်ဆင်နေစဉ်, သင်၏ကျောင်းသားအတွက်ရည်ရွယ်ထားသောအရင်းအမြစ်များစွာကိုသင်တွေ့လိမ့်မည်။
ကျောင်းသားသင်ယူ site ကို
Mason City ကျောင်းများ၏စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးအထောက်အပံ့များအကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။ ဤအချိန်ကာလအတွင်းဖြေရှင်းရန်နည်းဗျူဟာများရယူပါ။
သင့်ကလေးတွင်ကိရိယာမရှိလျှင် Chromebook ကိုမည်သို့ရယူရမည်ကိုရှာဖွေပါ. ရှေ့ဆက်ရက်သတ္တပတ်များအတွက်ထောက်ခံမှုရဖို့ဘယ်လိုလေ့လာပါ.
ငါတို့အသိုင်းအဝိုင်းထဲမှာဘယ်သူမှမငတ်သင့်ဘူး. အစားအစာဘယ်လိုရရမယ်ဆိုတာလေ့လာပါ, နှင့် MCS သည်အစားအစာမလုံခြုံမှုနှင့်ရင်ဆိုင်နေရသောကျွန်ုပ်တို့၏မိသားစုများကိုမည်သို့ထောက်ပံ့နေသည်.
ဤသည်မှာကျွန်ုပ်တို့အသိုင်းအဝိုင်းရှိလူအများအတွက်အလွန်အရေးကြီးသောအချိန်ဖြစ်သည်. ကျွန်ုပ်တို့၏ကြယ်တံခွန်အသိုင်းအ ၀ ိုင်းသည်အမြဲတစေကူညီရန်အဆင်သင့်ဖြစ်နေသည်ကိုကျွန်ုပ်တို့သိသည်. မိသားစုများကိုထောက်ပံ့ရန်နည်းလမ်းရှာပါ, ဒေသခံစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ (အထူးသဖြင့် hosp ည့်ဝတ်ပြုခြင်း) နှင့်ငါတို့အကူအညီလိုသူအခြားသူများ.
“ ခက်ခဲတဲ့အချိန်တွေမှာတောင်, ကျွန်ပ်တို့ရဲ့ ၀ န်ထမ်းတွေကိုယုံကြည်မှုရှိပါတယ်, ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခရိုင်ရဲ့ကျောင်းသားများနှင့်ရပ်ရွာ3Big Rocks. ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤအချိန်အတွင်းကျွန်ုပ်တို့၏ကျောင်းသားများနှင့်မိသားစုများအကြောင်းစဉ်းစားနေပြီးကျွန်ုပ်တို့၏ခရီးသစ်ကိုစတင်စဉ်ကျွန်ုပ်တို့၏အထက်တန်းကျောင်းဝန်ထမ်းများသည်သင့်အတွက်ဤနေရာတွင်ရှိနေစေလိုကြောင်းသင့်အားသိစေလိုသည်။. ဒီအသစ်တခုစိန်ခေါ်မှုဖြစ်ပါတယ်နေစဉ်, MHS ၀ န်ထမ်းများကဤအခမ်းအနားများကိုတုန့်ပြန်ခြင်းအားဖြင့်“ ခဏတာမှာတည်းခိုခြင်း” ကိုဂုဏ်ယူပြီးကျောင်းသားများနှင့်မိသားစုများအားလုံးသည်နေ့တိုင်းကြီးထွားလာပြီးကျွန်ုပ်တို့၏ကြယ်တံခွန်ယဉ်ကျေးမှုကိုသင်ယူသူများအဖြစ်ဆက်လက်ဖြည့်ဆည်းပေးနေသည်။ ”
Bobby DoddMHS ကျောင်းအုပ်
COVID-19 ပွဲမတိုင်မီကျွန်ုပ်တို့၏ Comet ယဉ်ကျေးမှုနှင့် E + R = O ကိုနားလည်ခြင်းအပေါ်လုပ်ဆောင်ခြင်းသည်ကောင်းချီးတစ်ခုဖြစ်သည်။. ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Mason Comet အသိုင်းအဝိုင်းနဲ့အတူကံမကောင်းတဲ့အဖြစ်အပျက်ကိုတုံ့ပြန်ရတာအလွန်ကံကောင်းတယ်လို့ခံစားရတယ်။ ”
Lauren GenteneMason ဆိုအလယ်တန်းကျောင်းအုပ်
“ ၀ န်ထမ်းတွေ, ကျောင်းသားများနှင့်လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းသည်လွန်ခဲ့သောနှစ်ပတ်အတွင်းယင်ကောင်အပေါ်ချိန်ညှိ။ လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်သင်ယူခဲ့ရသည်. MI မှ ၀ န်ထမ်းများမှာ“ အချိန်ကာလကိုပိုင်ဆိုင်ခြင်း” ဖြစ်ပြီးကျောင်းသားများနှင့်ဆက်နွှယ်နေရန်နှင့်သင်ကြားမှုကိုဆက်လက်ပြုလုပ်မည့်သင်ခန်းစာများကိုစီစဉ်ရန်ဖြစ်သည်. ကျွန်ုပ်တို့၏ကျောင်းသားများကိုနေ့စဉ်မြင်တွေ့ရခြင်းကိုလက်လွတ်။ ဤခရီးကိုအတူတကွသွားရန်မျှော်လင့်ပါသည်. ကျန်းမာလုံခြုံစွာနေပါ! MI Strong နေပါ!”
Eric MesserMason ဆိုအလယ်အလတ်ကျောင်းအုပ်
“ ကျွန်မတို့ရဲ့ ME ကြယ်တံခွန်ကနေကြင်နာမှုနဲ့မျှော်လင့်ချက်ဖော်ပြချက်တွေကိုတွေ့ရတာအားရကျေနပ်မိပါတယ်. ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ကျောင်းဆောင်ပုဒ်ကိုဆက်လက်ရှင်သန်နေဆဲဖြစ်သည်, Comet Country အဖွဲ့ဝင်များနှင့် ဆက်သွယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့ကျွန်ုပ်တို့ဂရုစိုက်ကြောင်းသိစေရန် 'ကြင်နာမှုကို M.E. မှစတင်သည်'. Mason Elementary ၀ န်ထမ်းများကကျွန်ုပ်တို့၏ကျောင်းသားများနှင့်မိသားစုများကိုထောက်ပံ့ရန်သန္နိ.္ဌာန်ချထားသည်။
Javaris PowellMason ဆိုမူလတန်း
"ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကြယ်တံခွန် Kid ရပ်တည်ချက်ထွက်အသက်ရှင်ရန်နှင့်ဇွဲလေ့ကျင့်ဖို့ကပိုအရေးကြီးသောဘယ်တော့မှပါပဲ, စာနာ, ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်, ခံနိုင်ရည်နှင့်အကောင်းမြင်. ကျွန်ုပ်တို့၏မိသားစုများ, ၀ န်ထမ်းများနှင့်ကျောင်းသားများကဤအရည်အချင်းများနှင့်အညီအသက်ရှင်နေထိုင်ခြင်းသည်ယခုအချိန်တွင်ဘဝပြောင်းလဲခြင်းဖြစ်သည်ဟူသောပုံပြင်များကိုမျှဝေပေးခဲ့သည်. ကျွန်ုပ်တို့သည် Mason ရပ်ကွက်ရှိကျွန်ုပ်တို့၏ကြယ်တံခွန်ကလေးများအတွက်အလွန်ဂုဏ်ယူပါသည်!!”
Melissa BlyMason ဆိုအစောပိုင်းကလေးဘဝစင်တာ
အဲဒါအစားအစာလား, စိတ်ရောဂါကုသမှု, နည်းပညာ, သို့မဟုတ်အရင်းအမြစ်များကိုသင်ယူခြင်း - ငါတို့ Mason ဆိုနှင့် Deerfield မြို့နယ်အသိုင်းအဝိုင်းအတွက်ရောက်နေတယ်.